Izwi Rinoyerera keyboard inouya kuApp Store, asi chete kuUS | IPhone nhau
Isu vashandisi veIOS tinoda chaizvo Apple's "yakapusa" keyboard. Ini ndinoti zviri nyore nekuti hazviite chero chakakosha, sekutibvumira kunyora mazwi nekutsvedza pamusoro pemavara. Chinhu chakanaka nezve default keyboard, kana pachinzvimbo, chakashata nezve yechitatu-bato kiyibho ndechekuti ivo vanowanzo shanda jerkily, kunyanya pavanoshandura pakati pemitauro kana kushandisa iyo Emoji keyboard. Chero zvazvingaitika, zano razvino reMicrosoft ratosvika kuApp Store: Kuyerera kweshoko. Zvakaipa: zvinongowanikwa muAmerican App Store.
Uye nei yauya kuchitoro cheUnited States chete? Zvakanaka chokwadi, ndamboedza iyo yapfuura Hub Keyboard chikumbiro, ndinofunga vaifanira kunge vakaita zvakafanana nekiyi keyboard. Mune maonero angu, kuvhurwa kweIzwi Kuyerera kunokurumidza nekuti, seiyo Hub, inongosanganisira chete rutsigiro rweUS Chirungu. Asi usavhunduke, nekuti Microsoft inovimbisa kuti ichave ichiwanikwa mune mimwe mitauro. Chinhu chakashata ndechekuti ivo havana kutaura chero chinhu nezve riini.
Kuyerera kweshoko, Microsoft keyboard inovimbisa
Pasina kupokana, kana Izwi Richiyerera riine chakakosha chingave chakakombama keyboard. Sezvauri kuona mukutora kunotungamira izvi pambiru, the keyboard curves uye mabhii akareba kubva pachigunwe chedu ari pazasi, izvo zvinotibvumidza kunyora neruoko rumwe kunyangwe tikashandisa 5.5-inch iPhone. Pasina kupokana, zano rakanaka randinogona kupotsa pandinotarisa zvinhu pane yangu iPhone kubva pamubhedha uye ini ndoda kupindura.
Uye zvakare, sevamwe vazhinji vechitatu-bato kiyi, Izwi Rinoyerera rinotsigirawo Rova zvakasimba kunyora, iyo yandakawana kugadzikana pese pandinoyedza asi, sezvandambotaura, ini handishandisi imwe keyboard nekuda kwekushayikwa kwayo kwemvura. Chokwadi ndechekuti ini ndoda kuyedza iyi Microsoft keyboard uye ini ndakatosaina beta yayo (iyo yandisina kuedza), asi hazvizondibatsire kana isingawanikwe muSpanish. Unofanira kuva nemoyo murefu.
Dhawunirodha Izwi Rinoyerera kubva kuUS App Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Izwi Rinoyerera keyboard inorova iyo App Store, asi chete muUS
Beyonce anoburitsa yake nyowani dambarefu Lemonade chete paTidal